कतै तपाइको मोबाइलमा कोरोनासम्बन्धी यस्तो एसएमएस त आएको छैन ? सावधान रहनुहोस — Sanchar Kendra
काठमाडौँ । कतै तपाईंले चलाउने मोबाइल फोनमा ‘तपाईं कोरोना पोजेटिभ भएको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउनु भएकाले परीक्षणका लागि आउनुहोला’ भन्ने म्यासेज आएको त छैन ? ‘हाम्रो रेकर्डअनुसार तपाई कोरोना पोजिटिभ भएको व्यक्तिसँग सम्पर्कमा आउनुभएकाले तपाई आफैलाई क्वारेन्टिन गर्नुहुन र परिवारका सदस्यहरू तथा साथीहरूसँग सामाजिक दूरी कायम राख्न अनुरोध गरिएको छ ।
कृपया पीसीआर परीक्षणको लागि निर्धारित समय र स्थानमा उपस्थित हुनुहोला । तपाईको उपस्थिति अनिवार्य छ । अन्यथा रु. १५,५५० जरिवाना गरिनेछ ।’ केही समययता अपरिचित व्यक्तिले यस्ता एसएमएसहरु व्यापकरुपमा पठाउन थालेको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) का प्रमुख डीआईजी सहकुल थापाले जानकारी दिए । यस्ता झूठो र गलत सूचना दिई जनमानसमा आतंक मच्चाइरहेको पाएपछि ब्यूरोले अनुसन्धान सुरु गरेको थापाले बताए ।
१ पिटुपी अर्थात एप्लिकेसन टु पर्सन एसएमएसबाट प्राप्त एसएमएसहरु छल, छद्म तथा धोखाधडी समेत हुन सक्ने भएकाले मोबाइल प्रयोगकर्ताले सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया गर्नुहुँदैन । यसलाई बेवास्ता गर्नुहोस् वा एसएमएस हटाउनुहोस् ।
२ वित्तिय तथा अन्य सेवा प्रदायक संघसंस्था र टेलिकम्युनिकेसन कम्पनीहरूले तपाईलाई कहिले पनि एसएमएसमार्फत तपाईंको व्यक्तिगत विवरणहरू उपलब्ध गराउन नसोध्ने हुँदा कहिल्यै पनि आफ्नो विवरण एसएमएसमार्फत नदिनुहोस् ।
३ एसएमएसमार्फत प्राप्त भएका लिंकहरूमा क्लिक नगर्नुहोस् । ४ एसएमएसमार्फत प्राप्त हुने लटरी वा छुट जस्ता प्रस्तावको प्रलोभनमा नपर्नुहोस् । यो धोखाधडी हो, सावधान रहनुहोस् । ५ झुक्याउने एसएमएस प्राप्त गर्नुभयो भने तुरुन्त प्रहरी वा तपाईको टेलिकम नेटवर्क प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् ।